အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:MASTERMATES/UserPage - ဝီကီပီးဒီးယား
< အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:MASTERMATES(အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:MASTERMATES မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၂ Article name issue in English
၃ Page move issue
မင်္ဂလာပါ MASTERMATES/UserPage။ ဝီကီပီးဒီးယားမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဝီကီရဲ့ လမ်းစဉ်ငါးရပ်ကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၀၄၊ ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Article name issue in Englishပြင်ဆင်
Dear sir, article name in my.wiki should be Myanmar as possible as it can. So, NGC 1, NGC2etc are ok cause it's hard to translate in Burmese. But, the article Pinwheel Galaxy should be in Burmese cause it can be translated in Myanmar so if you just make NGC objects, it would be great. Thanksalot for contributing in my.wiki. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၁:၂၂၊ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Page move issueပြင်ဆင်
Dear sir, since you don't know Myanmar language well, it's justamess when you move article. စီတပ် and Cetus are the same. ကြယ်စုတန်း means constellation. In english wikipedia, the usage is Cetus in article and Cetus (constellation) in category. So, in Burmese, စီတပ် (ကြယ်စုတန်း) is suitable, i think, rather than Cetus. Remember localization is first. Thanksalot for your contribution in Manmar Wikipedia. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၁:၁၂၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
I agree with Dr Lotus Black. AsaBurmese Wikipedia, the article title should be in Burmese if possible. Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၃၅၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
FYI, page moved to original title. Thanks. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၂:၀၇၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Thanksalot for contribution in astronomy. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၃:၁၂၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:MASTERMATES/UserPage&oldid=431047" မှ ရယူရန်
"MASTERMATES/UserPage" ၏ အသုံးပြုသူစာမျက်နှာသို့ ပြန်သွားရန်။
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၉:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၉:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။